စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းဝယ်ယူရန်အချက်များ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 29, 2016 Douglas Karr
ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စနစ်များ အထဲကအဲဒီမှာ ... သူတို့ထဲကအတော်များများအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့သတ်မှတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် အမျိုးမျိုးသောဒီဂရီနှင့်၎င်းကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများလုပ်သလိုပဲကြည့်နေတုန်းပဲ ကြီးမားတဲ့အမှားတွေ ငွေများလွန်းခြင်း၊ အချိန်များလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဖြေရှင်းနည်းကိုလုံး ၀ ၀ ယ်ခြင်းစသည်တို့တွင်ဖြစ်သည်။
အခွင့်အလမ်းကဘာလဲ သငျသညျရဲ့အားသာချက်ကိုယူခံရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့မြင်? ခဲများကိုပြုစုပျိုးထောင်နေသလား။ ရမှတ်ရောင်းအားထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ? လက်ရှိဖောက်သည်များကိုရောင်းရန်သိုမဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကူညီနေပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏အဖွဲ့၏ပမာဏကိုလျှော့ချပြီးသင်လက်ရှိဖြန့်ချိနေသည့်လက်စွဲဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
ဘာလိုင်း သင်ရလဒ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသလား သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ရရန်သင်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာတက်ပြီးပြေးရန်လိုအပ်သနည်း။ အောင်မြင်မှုကိုကြေငြာရန်ချိုးဖောက်ခြင်းပင်အမှတ်ကဘာလဲ။
ဘာအရင်းအမြစ်များ စနစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါကကြီးမားတဲ့တစ်ခုပါ။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုတေသနလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? ဖောက်သည်များကိုအစ မှစတင်၍ ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ သင်၏တုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များကိုပင်ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်ပါသလား။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုများသည်အလုပ်ဖြစ်မည်လားသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်အပိုဆောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဘာအချက်အလက်လဲ သင်သည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ မည်သို့ပြုမူခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အခြားဒေတာကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းကဲ့သို့ဖောက်သည်များ၏ခရီးသွားအချက်အလက်များကိုထိထိရောက်ရောက်ရွှေ့ပြောင်းပြီးမွမ်းမံမည်နည်း။ စနစ်မှားယွင်းနေသည်နှင့်သင်၏အရင်းအမြစ်များသည်စနစ်များအကြားအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဘာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မင်းလုပ်နိုင်လား ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းကိုလိုင်စင်သက်သက်ရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲစာတိုပေးပို့ရေးစရိတ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့၊ အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်များအပြင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊
ရယူခြင်း - ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနှင့် ဦး ဆောင်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုစီအတွက်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိသောခရီးသည်အဘယ်နည်း။ ရိုးရာအရင်းအမြစ်များ၊ ရည်ညွှန်းအရင်းအမြစ်များနှင့်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းပါ။ မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်မည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပြီးဝင်ငွေအများဆုံးမောင်းနှင်မှုနှင့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုကုန်ကျနိုင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကို အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ဆုံးသော်လည်းအမြတ်အစွန်းဆုံးသောခရီးများအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
လက်ရှိထားခြင်း - ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်စားသုံးသူတစ် ဦး အဖြစ်နေရန်သို့မဟုတ်ပြန်လာရန်အတွက်မည်သည့်ခရီးကိုသွားရသနည်း။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စနစ်များသည်ထိန်းသိမ်းထားမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာများဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျ onboarding စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, လေ့ကျင့်ရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစတင်ရန်နှင့်ထို့ထက်ပို။ နိုင်ပါတယ်။ ဤပလက်ဖောင်းများသည်သင့်ကိုမည်မျှကူညီပေးနိုင်သည်ကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့် စောင့်ရှောက် ဖောက်သည်များ
အမြန်နှုန်း - သင်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ဖောက်သည်များ၏တန်ဖိုးကိုမည်သို့တိုးပွားစေနိုင်သနည်း။ အပိုဆောင်းထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းများရှိပါသလား သင့်တွင်ရှိသောဖောက်သည်မည်မျှရှိသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုပင်မသိသောကြောင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ - အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး ချင်းစီကိုဝယ်ယူရန်သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ထမ်းများမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
စနစ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် - လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အချက်အလက်များကိုကောက်ယူသည့်စနစ်များသည်အဘယ်နည်း။
အခွင့်အလမ်းနှင့်ဝင်ငွေခွန် - ခရီးစဉ်တစ်ခုစီအတွက်ရည်မှန်းထားသည့်တိုးတက်မှုနှုန်းကားအဘယ်နည်း။ ထိုခရီးများကိုအလိုအလျောက်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းဖြင့်မည်သည့်ထပ်ဆောင်းဝင်ငွေရရှိနိုင်မည်နည်း။ သင်ပင်အချိုးအစားဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းမြင်ယောင်ရန် - စသည်တို့ကို 1%, 5%, 10%, etc - ဤပင်ခန့်မှန်းရန်လိုပေမည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ဘတ်ဂျက်မျှတမှုကိုပေးနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအခြားကုမ္ပဏီများကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်အချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရောင်းချသူများထံမှအသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ဤအချက်ကိုသတိရပါ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းများသည်ဆိုးဝါးသောအကောင်အထည်ဖော်မှုများကိုမထုတ်ပြန်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ပလက်ဖောင်းကိုရှာရန်သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်နံပါတ်များကိုဆားဖြင့်ထည့်ပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်၊ သင်ပလက်ဖောင်းကိုမဝယ်ခင်မှာသင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေအားလုံးကိုရေးဆွဲပြီးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အသင့်ရှိနေသင့်တယ်။ အိမ်တလုံးဆောက်တာနဲ့တူတယ်။ အသေးစိတ်ရေးဆွဲရမယ် ရှေ့မှာ သင်ကကိရိယာများ, လက်သမားနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဆုံးဖြတ်! ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာများကိုအောင်မြင်စွာဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုထိုမဟာဗျူဟာနှင့်အညီသင်အောင်မြင်နိုင်မည့်နေရာများကိုဖော်ထုတ်ရန်အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်မြင့်ကိုဝယ်ယူသောကုမ္ပဏီများနှင့်ပြတ်တောက်မှုများကိုမြင်တွေ့ရပြီးသူတို့၏ချို့ယွင်းချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏အရင်းမြစ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခွက်တဆယ်၊ အချိန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးအမြတ်များများရရန်အနည်းဆုံးသောအနှောင့်အယှက်ပေးဆုံးသောပလက်ဖောင်းကိုသင်လိုချင်သည်။
သင်၏ပလက်ဖောင်းကိုကိုးကားရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုကျော်။ အထူးသဖြင့်ဖောက်သည်များရှာဖွေရန်အွန်လိုင်းသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အသုံးပြုမှုကိစ္စများကဲ့သို့ပင်ကိုးကားမကြာခဏလက်ကောက်နှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဖောက်သည်များဖြစ်ကြသည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အထောက်အပံ့၊ နည်းဗျူဟာများ၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့ကိုကြည့်ရှုရန်ပျမ်းမျှ ၀ ယ်သူအားသင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချင်ပါသလဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းတိုင်းမှာသူတို့၌ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းများသင်ကြားရတော့မည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ကိုးကားချက်တစ်ခုစီနှင့်သင်၏အရင်းအမြစ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
သုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူ quadrant အပေါ် အခြေခံ၍ ဂဏန်းခြောက်လုံးပါသည့်ပလက်ဖောင်းကိုပေါင်းစပ်။ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းအခါ စတင်ရန်အဆင်သင့် ၎င်းတို့တွင်ဗျူဟာမရှိ၊ အကြောင်းအရာမရှိ၊ အမှန်တကယ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ သူတို့အလွယ်တကူမွမ်းမံနိုင်၊ ပေးပို့နိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတွင်နမူနာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနမူနာအချို့ရှိလိမ့်မည်ဟုသူတို့သေချာစဉ်းစားခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းတစ်ဗလာ shell ကိုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
ပလက်ဖောင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်မည်သည့်မဟာဗျူဟာအရင်းအမြစ်မှမရှိခဲ့ပါ။ ဖောက်သည်များအတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုရန်အကြံပေးများကိုငှားရမ်းခြင်း၊ ထို့နောက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အကြံပေးများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်နည်းပညာအကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားသည်ကိုသူတို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ခြင်း
ဒီဇင်ဘာ 30, 2016 မှာ 9: 39 AM
ဤအကြံပြုချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သော်လည်း သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းသည် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗျူဟာနှင့် အကြောင်းအရာမပါဘဲ လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဖောက်သည်များက သတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ်ပိန်းများစတင်သတ်မှတ်ရာတွင် ရှုပ်ထွေးသောပံ့ပိုးမှုပေးသည့် platform ကိုရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့သော platform တစ်ခုဖြစ်သည့် Synerise ကို အကြံပြုလိုပါသည်။ ဖောက်သည်များသည် အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ဝင်သုံးခွင့်ရရုံသာမက လေ့ကျင့်ရေး၊ အကူအညီနှင့် အကြံပြုချက်များလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။